China 6 axis Mig welding robot maka nchekwa ogbe emeputa na soplaya |Yunhua
HY1006A-145 bụ otu n'ime ndị kasị mma na-ere nke Yooheart robot, ị nwere ike inwe ya welded a otutu akụkụ, dị ka nchekwa ogbe.
- Kọmpat ọdịdị
-Welder nhọrọ (Megmeet, Aotai)
-Ezigbo ngwọta dị
Mig welding robot maka akwa nchekwa
Robot ịgbado ọkụ axis isii bụ otu n'ime robọt a na-ahụkarị nke ngwaahịa Yooheart.Dị ka ị maara, ihe karịrị 50% nke ihe dị mkpa iji weld bụ carbon ígwè, ya mere, iji weld carbon ígwè mma, e nwere ọtụtụ pụrụ iche designs maka isii axis robot.Enwere ihe karịrị nkeji 5000 rere na China kwa afọ n'ihi nkwụsi ike ya na ịdịte aka ya.
Dị ka otu n'ime ndị na-ewu ewu ulo oru ịgbado ọkụ robot, o nwere streamline ogwe aka na min nnyonye anya na max mgbanwe, na ịgbado ọkụ ugbu a voltaji na waya nri nwere ike ịchịkwa ozugbo.Enwere ike ịtọ paramita ịgbado ọkụ nke ahịrị ịgbado ọkụ ozugbo na pendant nkuzi nke robot.
Mmekọrịta robot nwere otu axis positioner
Na foto a, ndị ahịa anyị na-eji 2000mm rute robot jikọọ abụọ 1 axis positioner
Robot ga-aga n'ihu na ịgbado ọkụ mgbe ndị ọrụ na-ebu ihe ọrụ n'otu ebe.
N'ụzọ dị otú a, belata ọnụ ahịa ma bulie nrụpụta.
2000mm ogwe aka ogologo Robot
Foto ziri ezi na-egosi ngere anụmanụ ịgbado ọkụ nke 2mita ruru.
Ibe ọrụ bụ ọkpọkọ square, ndị ahịa na-eji Aotai 350A welder nwere ọrụ spatters dị ala.
Foto nke 3
Robot abụọ na-arụkọ ọrụ ọnụ
Foto aka ekpe na-egosi mmekọrịta abụọ nke Yooheart robot ọnụ.
Iji bulie ịgbado ọkụ ọsọ, na dozie ihe isi ike nke ịgbado ọkụ ọnọdụ (mgbe ụfọdụ otu robot ga-ezute ọwa ọnọdụ nsogbu), a ga-arụnyere abụọ ịgbado ọkụ robot.
Q1.Olee axis mpụga nwere ike ịgbakwunye robot HEART?
A.Ugbu a, YOO HEART robot nwere ike ịgbakwunye axis 3 ọzọ na robot nke nwere ike imekọ ihe na robot.Ya bụ, anyị nwere ọkọlọtọ robot ọrụ ọdụ na 7 axis, 8 axis na 9 axis.
Q2.Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye axis na robot, enwere nhọrọ ọ bụla?
A. Ị maara PLC?Ọ bụrụ na ị maara nke a, anyị robot nwere ike na-ekwurịta okwu na PLC, wee nye PLC akara iji jikwaa mpụga axis.N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike tinye 10 mpụta axis.Naanị ụkọ nke ụzọ a bụ na axis mpụga enweghị ike imekọ ihe na robot.
Q3.Kedu ka PLC si akpakọrịta na robot?
A. Anyị nwere i / O bọọdụ na kọbọd njikwa, enwere ọdụ ụgbọ mmiri 22 na ọdụ ntinye 22, PLC ga-ejikọ bọọdụ I / O wee nweta akara sitere na robot.
Q4.Anyị nwere ike itinyekwu ọdụ ụgbọ mmiri I/o?
A. N'ihi na nanị weld ngwa, ndị a I / O ọdụ ụgbọ mmiri ezuru, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ, anyị nwere m / O ịgbasa osisi.Ị nwere ike itinye ntinye na mmepụta 22 ọzọ.
Q5.Kedu ụdị PLC ị na-eji?
Nke gara aga: Robot na-egbutu Plasma
Osote: Ngwa igwe mgbatị ahụ Arc robot ịgbado ọkụ
Robot ịgbado ọkụ dị mma
ngwa ịgbado ọkụ robot
ihe ngwọta ịgbado ọkụ nke robotik